Fanamainana mangatsiaka mampihena Rf Cavitation Cryolipolysis Miaraka amin'ny 3 Tanana BD06
Ny sela matavy dia mora tohina noho ny fihenan'ny cool noho ny hoditra sy ny sela hafa manodidina. Ny sela matavy dia azo esorina tsara nefa tsy manimba ny hoditra.
2 Tantano ny tadin-dokotra Wol Cryolipolysis Tissue 2 in 1 Cool Fat Freezing CRS08
Teoria fiasana Cryolipolysis: Triglyceride amin'ny tavy dia hovana ho matanjaka indrindra amin'ny mari-pana ambany.
Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny radio matetika dia natao hanala ny tavy amin'ny fomba tena lasibatra.
40K Cavitation RF Ultrasound Body mampihena ny rafitra Fat Loss 3 Cavitation Beauty Machine BZ02
Ny lohan'ny fipoahana onja mahery 40K dia mampiroborobo ny metabolisma matavy ao amin'ny fikambanana, manala ny tavy hoditry ny volomboasary, manamafy ny hoditra, manatsara ny elastika amin'ny hoditra, sns
Fampihenan-tena amin'ny vatana 6 amin'ny 1 Monopolar RF Vacuum 40K Cavitation Fat Loss V809
banga cavitation rafitra novolavolaina araka ny fitsipiky ny suction, rong suction afaka manao ny pores misokatra tanteraka,
Ny milina tsara tarehy manara-penitra HI-EMT 4 dia mampiasa saha elektromagnetika mifantoka amin'ny hery azo antoka hamakivaky ny vatana sy hifaneraserana amin'ireo neurônan'ny motera.
Fampiasana an-trano IPL Quantum Hair Removal Radio Frequency Fanamafisana ny hoditra amin'ny fitaovana N2
Fampiasana an-trano IPL laser fitaovana dia toekarena sy mahomby. Ny fiarovana sy ny fifadian-kanina .1-3time fivoriana haingana indrindra miaraka amin'ny 10 minitra dia afaka mampihena ny fitomboan'ny volo amin'ny vatana manontolo sy ny fanoherana ny fahanterana.
Sidey New Arrival IPL fitaovana hatsaran-tarehy laser 3 IN 1 Silky Skin Hair Removal lmprove Acne fitaovana MT02
Ny epilator IPL dia tsy vitan'ny fanesorana volo fotsiny fa afaka mampiroborobo ny famerenana indray ny sela, mamerina ny laoniny amin'ny hoditra ary mamelombelona ny hoditra. Teknolojia IPL,
999999 Flashing Home Use IPL Ice Cool Hair Remover Device MT01
Ny epilator IPL dia tsy vitan'ny fanesorana volo fotsiny fa afaka mampiroborobo ny famerenana indray ny sela, mamerina ny laoniny amin'ny hoditra ary mamelombelona ny hoditra. Ny teknolojia IPL, ny jiro pulse dia miditra amin'ny folika volo hanakanana ny fahafahan'ny fitomboan'ny volo,
Cartridges azo ovaina IPL Series Ao an-trano Ampiasao fitaovana fanalana volo azo alain-tanana miaraka amin'ny Easy Operation MN03
hahatratra ny tanjona hamongorana ny sombin-kazo, ny fitsaboana ny telangiectasis, ny fanesorana ny volo ary ny hoditra mamelombelona. Satria mifoka kely angovo ny hoditra mahazatra, ka azo antoka ny fitsaboana.